Lanyard Bracelet Factory - China Lanyard Bracelet Vagadziri uye Vatengesi
Iwo lanyard bracelets aigona kuve akaonekwa zvakanyanya mumaboutiques. Aya mabharanzi akakodzera kushambadza, kusimudzira, kuratidza timu yechikwata, kutsigira iyo inofarira mitambo timu, kana kungo ratidza kuremerwa neakasiyana maitiro. Kusiyana neyechinyakare zvishongo, ine zvakwakanakira zvemutengo wakaderera, kureruka uremu uye yakagadzirirwa logo. Inogona kuve yakagadzirirwa nerubatsiro rweakasiyana zvigadzirwa, mavara, logo, uye accessories. Iyo yakashongedzwa nechengetedzo bhakoro kana kugadziridzwa kuvhara. Kuvharwa kunogadziriswa kunogona kuita kuti zvishongo zvikwane maoko. Mbama dzemaoko dzinogona kugadzirwa neoprene kana iyo lekab zvinhu, ine bhandi resimbi mukati mezvishongo. Saizi yayo yakaenzana ndeye 230 * 85mm. Zvishongo zvakarukwa zvakagadziridzwa sezvazvinogona kurukwa nemaitiro akasiyana. Saizi yayo yakaenzana ndeye 360 ​​* 10mm, saizi imwe inokodzera zvakanyanya (inokwana 6 `` ~ 8 '' chiuno chekristaro). Kana iwe uchida kune saizi yakagadziriswa, inogamuchirwa. Izvo zvinhu zvezvakarukwa zvishongo ndeye nylon kana polyester. The Logo kungava silkscreen yokudhinda, sublimated, dzakarukwa uye etc. Kuita kuti logo yako ive yakatanhamara, kuuya kwatiri ndiko kwako sarudzo yakanaka. Semubatsiri wekumira-imwe, isu tinopa seti yechigadzirwa kusanganisira kurongedza kwayo. Taura nesu zvino, usarega mukana wacho uchitsvedza.